Imarike yasekhaya ye-smart smart ukuze ikhule iye kwi-137.9 yezigidigidi zeminyaka kwiminyaka emihlanu ezayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Imarike yasekhaya ye-smart smart ukuze ikhule iye kwi-137.9 yezigidigidi zeminyaka kwiminyaka emihlanu ezayo
Uphando lweNtengiso yaseZiyon lupapashe ingxelo entsha enophando enesihloko esithi "Intengiso yasekhaya eyiSmart-NgeMveliso (iKhitshi eliSebenzayo, uKhuseleko kunye noLawulo lokuFikelela, uLawulo lokuKhanyisa, ukhathalelo lwempilo lwasekhaya, uLawulo lweHVAC, kunye nabanye): Umbono woShishino lweHlabathi, Uhlalutyo oluBanzi kunye noQikelelo, 2020- 2026 ”. Ngokwengxelo, ubungakanani bemarike yekhaya kulindeleke ukuba ifike kwi-USD 137.9 yezigidigidi nge-2026 ukusuka kwi-USD 85.6 yezigidigidi ngo-2021, kwi-CAGR ye-10.4% ngexesha lokuqikelela.
UPhando lweMakethi yaseZion lupapashe ingxelo entsha yophando enesihloko esithi “IMarike yeKhaya eliSmart-NgeMveliso (iKhitshi eSmart, uKhuseleko kunye noLawulo lokuFikelela, uLawulo lokuKhanya, ukhathalelo lwempilo yasekhaya, uLawulo lwe-HVAC, kunye nezinye): Umbono woShishino lweHlabathi, uHlahlelo oluBanzi kunye noQoqosho, ngo-2020- 2026 ”. Ngokwengxelo, i imarike yasekhaya smart Ubungakanani kulindeleke ukuba bufike kwi-USD 137.9 yezigidigidi ngo-2026 ukusuka kwi-USD 85.6 yezigidigidi ngo-2021, kwi-CAGR ye-10.4% ngexesha lokuqikelela.
Njengabahlalutyi boPhando lweNtengiso yaseZiyon, eyona nto ikhulayo kwimarike yekhaya ibandakanya ukwanda kolwazi phakathi kwabasebenzisi malunga nokusetyenziswa kwamandla, ukunyuka kwengeniso elahlekileyo kumazwe asaphuhlayo, ukukhula kwabantu abadala, kunye neenkqubo zikarhulumente phakathi kwabanye. Ngaphandle kwalokhu, ukwanda kweemfuno zokhathalelo lwempilo yasekhaya kukunika amandla ukuphuhliswa kwemarike yekhaya elungileyo. Kwelinye icala, imijikelo emide yokutshintsha isixhobo kunye neendleko eziphezulu ezidityaniswe nemfuno ethintelweyo yabasebenzisi yimiceli mngeni ephezulu enqanda intengiso yasekhaya ehlakaniphile ukusuka ekutshintsheni ukuya kwinqanaba lokwamkelwa ngobuninzi ukusuka kwinqanaba lokwamkela kwangoko.
Nangona kunjalo, ukuveliswa kwemveliso entsha ngabadlali beemarike kuyonyusa ukhuphiswano ngalo ndlela kukonyusa ukukhula kwemarike yekhaya. Umzekelo, ngo-Agasti ka-2018, uPhilips Hue wabhengeza inani lezibane ezitsha eziqhuba kakuhle ukuphuhlisa intengiso yasekhaya yasekhaya.
Ukwahlulwa kwemarike yekhaya efanelekileyo kwenziwa ngokusekwe kwingingqi nakwimveliso. Amacandelo eemveliso kwimarike yekhaya efanelekileyo lukhathalelo lwempilo ekhaya, ikhitshi elilumkileyo, ulawulo lwe-HVAC, ulawulo lwezibane, kunye nabanye. Ukulawulwa kokukhanya kubambe esona sabelo sikhulu kwimarike yekhaya efanelekileyo ngenxa yokuthotywa kombane emakhayeni. Izinzwa zokukhanyisa zilawula ubunzulu bokukhanya okungeyonyani ngokokukhanya kwendalo, ngoko ke kuthoba ukusetyenziswa kwamandla kunye nokwandisa imakethi yasekhaya ehlakaniphile.
Intshona Melika ithathe esona sabelo sikhulu kwimarike yasekhaya efanelekileyo ngenxa yokwanda kwenani labemi kunye nokunyuka kwebango kukhathalelo lwempilo yasekhaya. IYurophu yenye yezona ntengiso ziphambili zasekhaya njengoko ileqa uMntla Melika. Amanyathelo aseburhulumenteni eMntla Melika aquka ukulawula kude iimitha zamandla, igesi kunye namanzi ukuhamba ngokulula kwi-grid smart. Amandla kunye nokonga iindleko, ukuguga kwabantu, ukunceda, ukhuseleko, amanyathelo okuqala kurhulumente, kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni zezona zinto zikhuthazayo eziqhuba uphuhliso lwentengiso yasekhaya kwiminyaka ezayo. I-Asia Pacific icwangcisiwe ukubonisa uphuhliso olubalulekileyo kwimarike yekhaya elungileyo kwiminyaka ezayo.
Iinkampani ezibalaseleyo kwimarike yekhaya eyi-smart yi-Nokia AG, Legrand, Ingersoll-Rand plc, Johnson Controls Inc., Acuity Brands, Inc., Schneider Electric SE, United Technologies Corporation, ABB Ltd., Nest Labs, Inc., Samsung Electronics Co, Ltd., iCrestron Electronics, kunye neHoneywell International Inc. phakathi kwabanye. Aba badlali babanga ukuba bandise intengiso yasekhaya yasekhaya.